सरकारले गणतन्त्र दिवसमाजनताको इमानमाख चक्मालगाएर यस्ता व्यक्तिहरुलाई तक्मा बाँडेको छ जसले बेइमानीको सगरमाथामात्र चढ्या छन् अहिलेसम्म ।
अपनाहात जगन्नाथ गरे र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका आफ्नै नातेदारलाई तक्मादिएर यसरी पुरस्कृत गरिएको छ मानौं तिनले दुई वर्ष अघि भूर्इंचालो गएको बेला हजारौंको ज्यान बचाएका थिए । तर अहिलेसम्म पुनर्निर्माणको प मै अड्किएको सरकारले तिनै भूकम्प पीडितलाई वासको व्यवस्थागर्न आफ्नो कर्मशील हातले सयौं घर बनाउने धुर्मुस र सुन्तलीलाई भने बेवास्ता गर्दछ ।
जो साँच्चैको तक्माको हकदार थिए तिनलाई बेवास्ता गरेर तमाचाका हकदारहरुलाई पुरस्कृत गरेर यो सरकारले आफ्नो मान आफै घटाएको छ । राष्ट्रपति दिवगंत पति जो कुनै पार्टी विशेषका प्रभावशाली नेताथिए र जसको एउटा दुर्घटनामा मृत्यु भयो ।
त्यसो त हाम्री राष्ट्रपति पनिकुनै दलकै नेताभएर त्यो पदमापुगेकीहुन् । उनै राष्ट्रपतिले आफ्नै कार्यकालमा पीण्ड खाइसकेका आफ्नातिनै पतिलाई मरणोपरान्त तक्मादिएर पुस्कृत गरिन् र यो पुरस्कार थापिन् उनकै सुपुत्रीले ।
घ्यू कहाँ पोखियो भाँडामा भने जस्तै आफ्नो हातमा डाडु, पन्यौ आएपछि घ्यूको भाँडो नै भातमा रित्याउन पाइन्छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो ।
के वर्तमान राष्ट्रपति भदा अघि का राष्ट्रपतिले त्यो पुरस्कार दिन सक्थेनन् ?
वाउनी पछि आउने अर्का राष्ट्रपतिले वर्तमान राष्ट्रपतिका दिवगंतपतिलाई सम्मानित र पुरस्कृत गर्न सक्थे । त्यस्तो के बितेको थियो र ?
अनि प्रधानमन्त्रीका सुपुत्रको योग्यता त जगजाहेर छ । पिताको छाँया मूनि हुर्केको एउटा बिरुवाभन्दा बढी उनको कुनै योग्यता र परिचय छैन ।
हो बहुविवाह गरेकाकारणले उनी चर्चित छन् । तर के सामान्य जनताका लागि अपराध र अमान्य मानिएको बहु विवाह गर्नुलाई प्रधानमन्त्रीको छोरा भएको नाताले उनको अपराधलाई क्षम्य मानेर उनलाई पुरस्कृत गर्न सकिन्छ ?
यदि योग्यताको र पुरस्कृत हुने मापदण्ड यही हो भने देशका हरेक गल्लि र मोडमा यस्ता योग्यहरु गाँजा तानिरहेका भेटिन्छन् ।
तिनलाई पनि पदक दिएर सम्मानित गरे भैगो नि ? त्यही भएर होला प्रधानमन्त्रीका छोराले त्यो पदक लिनअस्विकार गरिदिए । शायद उनले आफ्नो अनुहार जनताबीचको लोकप्रियताको ऐनामा राम्रो सँग हेरिसकेका छन् ।
यसैलाई भन्छन् आफ्नो गिरेबानमा चियाएर हेर्नु । उपराष्ट्रपतिको छोराको नामशायद धेरैले नसुन्या पनिहुन सक्छ । तर उनलाई पनियसपालिको गणतन्त्र दिवसमा पुस्कृत गरियो । झन धेरै ईमानदार र परिश्रमी भनेर बखान गरिएका उपराष्ट्रपति जो पहिला आफै पशु पालन गरेर जीविकोपार्जन गर्दथे ।
उनैले आफ्नो नाम र प्रभावको भरमा आफ्नो छोरालाई दिन लागिएको पुरस्कार दिनबाट रोकेनन् ।
शायद सबै बाउआमालाई आफ्नै आँखा अगाडि आफ्ना सन्तानहरुलाई सम्मान गरिएको र तक्मादिएको हेर्न मन लाग्छ । यस्तो मोहको बन्धनबाट हाम्रा राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कसरी अछुतो रहन सक्छन् । मोहको धागो गाँठो पर्छ तर टुट्दैन ।
किनकि हरेक बाउआमा भनेका आफ्ना सन्तानका लागि धृतराष्ट्र र गान्धारी नै हुन् ।
देशमा एउटा यस्तो गलत परम्पराको थालनी भैसकेको छ । जहाँ प्रभावशाली र शक्तिशाली व्यक्तिहरुले जे गरे पनि हुन्छ ।
नियम, कानुनबनाउने र लागु गर्नेउनीहरु नै हुन् तर आफुमा नभएर अरुमाथि लागु गरेर आफ्नो पदको गरीमालाई घटाइ रहेकाछन् ।
हैन भने महिला राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश भएको देशमा महिला विरुद्ध हुने हरेक प्रकारको हिंसामा पीडकलाई दण्डित गर्ने कानुन किन बनाउँदैनन् ?
अझ बलात्कारको केसमा अति नै कडा कानुन बनाएर लागु गर्नुपर्नेमा यी तिनै जना देवीहरु अ आफ्नो शक्ति र प्रभावलाई आफ्ु संलग्न रहेको दलको आदेश तामेलीमा खर्च गरिरहेका छन् ।
भन्ने बेलामा देशका तिनवटै प्रमुख शक्तिशाली पदमा एकैपल्ट कुनै पनिमहिला चुनिनु दुर्लभ हो र विकसित देशमापनि यस्तो संयोग या घटना देख्न पाइन्दैन भन्ने । तर यी तीन देवीहरु आफ्नो देशका ५१ प्रतिशत अन्य देवीहरुकालागि लड्ने र कानुन बनाउनकालागि किन मौन छन् ?
आफ्नो योग्यता भन्दा कुनै राजनैतिक दलको सदस्य र झुकावका कारणले पाइने र यस्ता पदमा विराजमान हुनेहरुले गर्ने कामपनि धृतराष्ट्रको जस्तै अन्धो भएर आफ्नालाई काखा र अन्यलाई पाखालगाउने हो । त्यसैले त छानी, छानी आफ्नालाई पदकदिएर सम्मानित गरिरहेछन् । यो सबै दृश्य देख्दा र पढ्दा लाग्छ यो देशमा गणतन्त्र हैन मनपरितन्त्रआएको छ ।
जहां जसलाई जे गरे पनि छुट छ । साधारण जनताले जेब्रा क्रसबाट बाटो नकाट्दा दण्डित हुनुका साथै २ सय रुपैंया जरिवानापनि तिर्नुपर्दछ । तर यही देशका ठूला, बडा हस्तिको जब सडकमा सवारी चल्दछ तब तिनै निमुखा जनताले घण्टौंसम्म सडकको जाममा बसिरहनु पर्दछ ।
चाहे तिनीहरु बिरामी किन नहुन् या अन्यकुनै जरुरी कामले कँही जान लागिरहेका नै हुन् । अब देशको अभिभावकको सवारी सडकमा चलेकोबेला उनका सन्तानले त्यति सास्ति त भोग्नै पर्छ नि । हामीले नै चुनेर वा रोजेर पठाएका अभिभावकजो हुन् ।
अभिभावक भएकैले यो देशका प्रधानमन्त्री आफ्नी छोरीलाई स्थानीयतहको चुनावमा जसरी भएपनि जिताउन लागिपरेका छन् ।
चुनावमा जित, हारको निर्णय हुनु भन्दापहिले नै जुवाडेले जाँड पिएको झोकँमाहार्ने डरले तासको पत्तिच्याते झैं मतपत्र च्यातिदिएछन् ।
स्कूल पढ्दा कापी, किताब फाड्ने र परीक्षामा प्रश्नपत्र च्यात्ने बानी परेकाहरुले यो भन्दा बढी जान्दा पनि जान्दैनन् र गर्दा पनि गर्दैनन् । अनि यिनैलाई योग्यमानेर हाम्रो मीडिया प्रशँसागर्न थाल्दछ । कुनै दिन यस्तै तथाकथित योग्यले पुरस्कार पाएर सम्मानितहुन बेर छैन ।
आखिर देशमा धृतराष्ट्रहरुकै शासन छ । त्यसैले त कौरवहरु आफै, आफैमा लड्दैछन् । पाण्डव जस्ता जनता यो तमाशा हेरिरहेका छन् । बिचरा जनता डर र दुखले तालीपनि बजाउन सक्दैनन् । पदकको लागिपनि छिनाझपटी गरिन्छ र सोर्सफोर्स लगाएर आफ्नो पोल्टामा तक्माको फलझार्न लगाइन्छ ।
हुनेले शक्ति नहुनेले जुक्ति लगाएर भएपनि तक्मापाइरहेका छन् ।
यिनको यो तिकडम र करामात हेर्दा सगरमाथाको शीर झनै झुक्दै गएझैं लाग्छ । यी तक्मा र सम्मान प्रदानगर्न सक्षमहरुको हरेक अक्षमता र ज्यादतिलाई हामी जनताले चूपचाप हेरिदिनु पर्ने र सुनिदिनु पर्ने । अनिचुनावमा यिनैलाई भोट र अरुबेला राज्यले प्रदान गरेको सडेगलेको सुविधा उपभोग गरेको बदलामा करको रुपमा नोट पनिदिनु पर्ने ?
तर यी खोटले भरिएकाशक्तिशालीहरुले हामीलाई चोटको तक्मादिएर हरेक बजेटमा सम्मानित गर्दछन् ।
भलै हामीजनताको भान्साको छानो चुहिएर पेटमा मानो नपरोस् तर नेता र मन्त्रीको भान्सा बजेट राज्यको पैसाले हरेक महिना बढ्दछ ।
अनि यिनै राज्यका डाडु, पन्यौ आफ्नो हातमा लिएकाहरुले बजेटको चारो छरेर जनताका अगाडि आफ्नो बिवशता रुपीगोहीको आँसु चुहाउँछन् ।
वास्तवमा पदक वा तक्मा त यिनैले पाउनु पर्ने हो सिहंदरवारको ठूलो पर्दामा यति शानदार र जीवन्त अभिनय गरेकोमा । यिनले विलेन बनेर जनताले तिरेको करको पैसामा लडीबुडी गरेकै छन् ।
अनि बडो निर्दोष भावले आँखामा नकली आँसु भरेर चुावमा भोट माग्न जनताको घर, दैलो पनि चहार्छन् । हरेक खालको अभिनयगर्नमा खप्पिस छन् यो देशका विभिन्न राजनीतिक दल, तीनका नेता, सरकार र यसका मन्त्रीगणहरु । त्यसैले राजनीतिका यी माहिर खेलाडी अथवा कलाकारहरुलाई तक्मा दिएर सम्मानित र पुरस्कृत गरौं ।